Information inounganidzwa kushandisa magazini nepachinko
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Information inounganidzwa kushandisa magazini nepachinko
Kuti kwamuri kuti nepachinko, ndinofunga kuti vamwe vanhu, ndiko kuti kuverenga magazini nepachinko. Mumakore achangopfuura, kwete chete magazini akabhadhara, free bepa, etc. pavanoparidza chiitiko uyewo rakabva zvizhinji. Free bepa, nokuti Nowak pachena uye uende nepachinko yokumusoro, kunobatsira mune isingasviki magazini bhiri. Magazine kuti nepachinko mashoko rakazara rakabva vakawanda, asi mukati vari zvakasiyana.
uye pakati pavo nehasha, akakunda ruzivo zvinhu uye muenzaniso ruzivo uye zvinoedza gomba mashoko ose nepachinko yaiitirwa rava wechikoro pane chinhu yava nyaya. Chokutanga, mumagazini kuti muenzaniso mashoko rava musoro, huru raparadza fungidziro uye kugadzirwa Xintai, uyewo kuvimbika, akadai zvakasiyana-siyana mashoko anoitwa rakachengetedzwa rakabudiswa.
Kupfuura zvose, panyaya nepachinko ndiyo kuti rotational kumhanya zviuru Yen yave re. Inotaurwa kumuganhu mutsetse, asi muganhu mutsetse uyu, nokuti nhamba kukosha kuti anofanira rakapa kuverenga siyana kusanganiswa tsika dzakadai guru raparadza fungidziro uye mukana kushanduka mukana, kukarukureta ndiyo yainetsa.
Munguva nepachinko yokumusoro yaunogona kuenda, asi ndinofunga kuti mumwe kutendeutsa reshiyo yakasiyana, kunyange Muganhu mutsetse achizosiyana iri mari unodiwa. Zviri mumagazini, panewo nzvimbo kuti akapa kudzikinurwa mwero aparadzane pamuganhu mutsetse, zvava nyore zvikuru. Kana ari
machine slots kubva muzana chichava chinhu chimwe. Kana nepachinko ari chipikiri kugadziridzwa, nezvimwewo, hapana mashoko ari muchina basa muchina paradzanisa zvinosiyana. Zvisinei, muna slots, sezvo kupinza nhamba mumwe kutenderera takatsunga, isu muchina paradzanisa iri kunze.
nani Zvechokwadi pedyo 100%, zvichava zvinobetsera.
mukuru rakavimbika Chokwadi, kana iwe chaizvoizvo kutsikwa ndiko, kuti ndiyo ruzivo mberi uchida, asi nekuti zvakakosha yakarova kuziva michina muganhu mutsetse ndiyo yakanakisisa, mashoko iri nani kuenda nepachinko mupfungwa Ndinofunga.
uye ipapo, munhu magazini nyanzvi zviitiko uye Xintai mashoko ose nepachinko yaiitirwa zvava wechikoro. Izvi mhando magazini mashoko Kwandiri, kunyange nepachinko yokumusoro divi uye ini kubhadharwa mari. Nokuti tiri zvishoma nhamba zviitiko re kuti, imi kuuya kwandiri chiitiko kana chete kukwezva vatengi uchida zviitiko kuti Kushanda nomwoyo wose. Events
chokwadi kuti ave re pamusoro magazini ino mhando ndechokuti chiitiko ndewe aiming kuti. Pedyo nepachinko yokumusoro shure kwenyu, kana iwe uri kwandiri, edza kuenda aiming panguva zviitiko akarongwa.
pane zviitiko kuti kazhinji dzinoiswa papeji yokutanga, ndinofunga kuti kureva iri zvinoitirwawo apa. Nenzira iyi magazini ruzivo, une mashoko akasiyana kuti anova nyaya magazini. Kana womuenzaniso mashoko ari sangano, iva nechokwadi kuti aone kumuganhu mutsetse, ari nepachinko yokumusoro mashoko ari magazini pasi, edza kuva nechokwadi kuti kutarisa chiitiko.
kubva siyana nemaonero, kungava kwakanaka uye edza zvakawanda muunganidzwa.